Ungabhalisa kanjani ku-Binance Bhalisa Bhalisa - Bitcoinxxo
Kufika kuma-20% wesephulelo se-Binance referral
Isifinyezo sokubhalisa seBinance: Thola isaphulelo semali / Ukudluliselwa kweBinance / Incomo ye-Overseas Exchange / iBinance / Overseas Futures / Ukuhweba kweBitcoin / Isincomo seBinance
Ungabhalisa kanjani ku-Binance Bhalisa Bhalisa
Kungani Kufanele Usebenzise i-Binance Exchange
Isingeniso sokulungiswa kweBinance
Gcina kuze kufike ku-20% kuma-Binance Referrals
Ukudluliselwa kwe-Binance Bybit Bitget
Ungayisebenzisa kanjani iBinance – mobile, future future trading, app, api, future, dex
Ukusetshenziswa kweBinance: Ukuhweba Kwesikhathi Esizayo / Izinhlamvu zemali ze-BNB / Ukubeka izitaki / Ukudluliselwa
Amathiphu wokuhweba we-Binance Futures
I-Binance Self Referral Code Self-Input
Ungayifaka kanjani i-Binance Cryptocurrency
I-Tesla iyisitoko sokuqala esidlangalaleni kuthokheni yesitoko seBinance
Ukubhaliswa Kokufaka kwe-ID ye-Binance Referral
Yabelana ngekhodi yokudluliselwa kweBinance / ikhodi yokudlulisela
Ungayibuka Kanjani / Ishintshe i-Binance referral
20% Off Binance Lifetime Fees Bhalisela i-Referral Code
Ungabhalisela kanjani ubulungu beBinance
Kungani Kufanele Uthole Isaphulelo Semali Engama-20% nge-Bybit
Izinzuzo eziphezulu zokubhaliselwe kwe-Bybit
Umcimbi wokufakwa kuhlu kwe-Bybit Dogecoin
Ungayenza Kanjani Imali Usebenzisa Isilinganiso sokuhweba se-Bybit Margin
I-Bybit Margin Trading Fee Isaphulelo Kuze kufike ku-20% Ungabhalisa Kanjani
20% isaphulelo ekudlulisweni kwekhomishini ye-bybit
June 8, 2021 June 7, 2021 by admin
Kunezizathu eziningi zokufunda ukuthi ungabhalisela kanjani iBinance. Njengokushintshaniswa okuhle kakhulu emhlabeni, isekela izinhlobo ezahlukahlukene zama-cryptocurrensets nezindlela ezahlukahlukene zokuhweba, ngakho-ke unezinhlobo ezahlukahlukene zokukhetha nezindlela ezahlukahlukene zokubiyela.
Izinzuzo zokubhalisela i-Binance
Amakhulu ezinhlamvu zemali ezahlukahlukene ezingathengiswa eKorea zingathengiswa
Usekela ukuhweba kwesikhathi esizayo, ukuvimbela ukwehla
Ukuhweba kweMargin kusekelwa, ukuhweba okuphezulu kakhulu kungenzeka, ngakho-ke ukubuya okuphezulu kungenzeka
Ivolumu yokuhweba ephezulu ingagaya ivolumu ephezulu yokuhweba.
Iyakwazi ukukhiqiza imali engenayo yenzalo njengomkhiqizo wediphozi (staking)
Uhlelo oluzinzile – akukho okusalile. Ungayeki – Ukuhwebelana kwasekhaya kuqhuma nsuku zonke …
Imali ephansi – Imali ephansi uma iqhathaniswa nokuhwebelana kwasekhaya
Izaphulelo ezahlukahlukene ezinikezwa lapho uphethe i-BNB yakho (i-Binance Coin)
Ukuthengiselana kwe-Arbitrage kungenzeka – Ukuthengiselana kwe-Arbitrage kungenzeka kusetshenziswa i-Korea premium
Ungabhalisela i-Binance usebenzisa i-imeyili yakho nenombolo yeselula.
Ungabhalisela ifomu lakho olithandayo. Umuntu ngamunye mhlawumbe unendlela yakhe ayithandayo.
Ngemuva kokufaka i-imeyili nephasiwedi yakho, chofoza ku-‘Dala i-Akhawunti ‘.
Uma ulandela isixhumanisi esingenhla, kuzovela isikrini sokubhalisa.
Ungakhetha phakathi kokubhalisa nge-imeyili noma ngocingo.
Njengoba iningi labantu likhetha ukubhalisela i-imeyili, ngizochaza kafushane ukubhaliswa kweselula.
Uma ukhetha Iselula phezulu bese ufaka imininingwane edingekayo, ikhodi yokuqinisekisa izothunyelwa kunombolo yakho yeselula.
Bese ukhetha i-Korea 82 yekhodi yezwe bese ufaka u-10XXXXXXXX ngenombolo yeselula, ushiye u-0 oholayo.
Iphasiwedi kufanele ibe inhlanganisela yezinhlamvu okungenani eziyi-8, okungenani uhlamvu olukhulu lwesiNgisi olungu-1, kanye nohlamvu olungu-1 okungenani.
Ukuze uthole isaphulelo se-Binance Fee, kufanele ufake ikhodi yesaphulelo semali enkambu ye-ID yokudluliselwa. Uma ulandela isixhumanisi, sizofakwa ngokuzenzakalela.
Isaphulelo esingu-20% emalini yokuthengiselana singasetshenziswa ngaphandle komkhawulo wesikhathi.
Ngemuva kwalokho, kusukela manje kuqhubeke, ngizochaza ngokuningiliziwe ukuthi ungabhalisa kanjani usebenzisa i-imeyili.
Khetha ikheli lakho le-imeyili ekhoneni elingenhla kwesobunxele, faka ikheli lakho le-imeyili, iphasiwedi, nekhodi yesaphulelo bese uqhafaza okuthi Dala i-Akhawunti.
Ngalesi sikhathi, i-password idinga okungenani izinhlamvu eziyi-8, okungenani uhlamvu olukhulu lwesiNgisi olungu-1, kanye nohlamvu olungu-1 okungenani.
Futhi udinga ukufaka ikhodi yesaphulelo ukuthola isaphulelo esingu-10% kumali yokuthengiselana. Uma ulandela isixhumanisi, sizofakwa ngokuzenzakalela, ngakho-ke awudingi ukusifaka ngokuhlukile.
ikhodi yesaphulelo ithi XPC9ZLH6 kuyinto.
Chofoza u- “Dala i-Akhawunti” ezansi ukubonisa iphazili.
Kufanele wenze iphazili ukuze wenze ukuqinisekiswa okuphephile ukuvimbela ukubhaliswa okuzenzakalelayo noma kwe-spammy.
Sicela ufake ikhodi yokuqinisekisa enamadijithi angu-6 oyithunyelelwe nge-imeyili. Ikhodi isebenza imizuzu engama-30.
Faka ikhodi yokuqinisekisa enamadijithi ayi-6 ethunyelwe kuwe nge-imeyili esikrinini sokuqinisekisa i-akhawunti ukuqedela ukubhalisa.
Ngemuva kokufaka ikhodi yokuqinisekisa, isibuko sokubhalisela ukubhalisela sivele ngokuzenzekelayo. Chofoza u-‘Yiya kudeshibhodi ‘ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Uma ungene endaweni engafanele, ungahambisa kudeshibhodi ngokuhambisa igundane ngaphezulu kophawu lomuntu ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Uma ufaka ngephutha, kuzovela ibha yesibhengezo lapho uhambisa igundane lakho phezu kwesithonjana somuntu phezulu ngakwesokudla. Ungaya kudeshibhodi ngokuchofoza kukheli lakho le-imeyili.
Uma uya kudeshibhodi, kuvela isikrini esilandelayo.
Ukuqinisekiswa kwe-2FA. Kubalulekile ngoba ungakwazi ukukhipha imali kuphela ngemuva kokuqedela ukuqinisekisa okukodwa kokukabili: ukuqinisekiswa kwefoni ephathekayo nokuqinisekiswa kwe-Google OTP. Ungakwenza kokubili.
Uma ukhetha Ukuqinisekiswa Kwefoni kuqala, isikrini esingenhla sizovela. Uma uchofoza ikhodi yezwe bese uya phansi, ungakhetha iSouth Korea. Ikhodi yezwe laseKorea ingu-82.
Ngenombolo yeselula, shiya u-0 oholayo bese ufaka amadijithi ayi-10. Uma uqhafaza Thumela ikhodi yalekhodi elandelayo yokuqinisekisa i-sms, ikhodi yokuqinisekisa izothunyelwa efonini yakho. Yifake.
Uma uchofoza Thumela ikhodi kwikhodi yokuqinisekisa ye-imeyili, ikhodi yokuqinisekisa izothunyelwa ku-imeyili yakho. Faka yomibili ikhodi yokuqinisekisa i-sms nekhodi yokuqinisekisa i-imeyili bese ucindezela ukuhambisa ukuqedela ukuqinisekiswa kwe-2FA futhi ekugcineni ungakhipha.
Uma wenze ukuqinisekiswa kwefoni, awudingi ukwenza ukuqinisekiswa kwe-Google. Kodwa-ke, uma ufuna ukusebenzisa isiqinisekisi seGoogle, khetha ubuqiniso beGoogle ukuze uqhubeke. Ungagunyaza kokubili ifoni ne-Google Authenticator, noma ungagunyaza eyodwa kuphela.
Isiqinisekisi se-Google singalandwa ku-Apple App Store noma ku-Google Play futhi sifakwe kufoni noma kuthebhulethi yakho. Vele useshe isiqinisekisi se-Google ku-App Store.
Ngemuva kokufaka isiqinisekisi se-Google kufoni noma kuthebulethi yakho, thepha Okulandelayo bese uqhubeka ngesinyathelo 2.
Iya ku-Google Authenticator efakwe ku-smartphone yakho bese uchofoza u- + ekhoneni elingezansi kwesokudla ukuvula ukuskena kwe-QR Uma uskena uphawu lwe-QR nefoni yakho, iBinance Exchange ibhaliswa ngokuzenzakalela ku-OTP.
Inombolo enamadijithi ayisithupha izosetshenziswa njengenombolo yokuqinisekisa ukuphepha yokungena ngemvume nokuhoxa ngokuzayo. Ngemuva kokubhalisa, chofoza Okulandelayo kusinyathelo 2.
Isinyathelo 3 sibaluleke kakhulu. Kunconywa ukuthi urekhode futhi ugcine ukhiye wesipele kwenye indawo. Ukulahlekelwa yilowo khiye wesipele kuyakhathaza.
Uma ifoni yakho iphukile noma ulahlekelwa yifoni yakho, ungabuyisela isiqinisekisi se-Google ngokhiye wesipele. Uma ulahlekelwa noma ungazi ukhiye wesipele, kuyacasula kakhulu ngoba kungasethwa kabusha ngokusebenzisa inqubo yokuqinisekisa ubunikazi ku-Binance Exchange.
Esinyathelweni sokugcina esingu-4, cindezela Thumela ikhodi, faka ikhodi yokuqinisekisa ethunyelwe kuwe nge-imeyili, bese ufaka ikhodi yokuqinisekisa enamadijithi ayi-6 ye-Google Authenticator bese uyithumela, futhi usuqedile.
Indlela Yokuqinisekisa Ubunikazi, Khulisa Umkhawulo Wokuhoxiswa
Uma usubhalisile, manje usukulungele ukuhweba, kepha kunomkhawulo wokuhoxa. Ungakhipha kuze kufike ku-2 BTC ngosuku kanye ne-2 Bitcoins ngosuku. Ngamanani wanamuhla, cishe azungeze u- $ 500,000.
Kwezinye izinhlamvu zemali ezifana ne-Ethereum ne-Ripple, umkhawulo wokukhipha nsuku zonke usethwe ngentengo yama-bitcoins ama-2.
Ngemuva kwalokho, uma ufuna ukwandisa umkhawulo wokuhoxa, udinga ukuqinisekisa ubuwena, okungukuthi, i-KYC. Uma uqinisekisa ubuwena, umkhawulo wansuku zonke wokukhipha imali uzokwenyuselwa ku-100 BTC. Kungaba cishe yi-25 Won yaseKorea. Izintuthwane ezijwayelekile ziyachichima.
Uma ungadingi ukukhipha ngaphezu kwezingu-2 ngosuku, awudingi ukuqinisekisa ubunikazi bakho. Abangu-50 000 bawine ngosuku akuyona imali encane. Ake sibhekisise ukuthi singaqinisekisa kanjani i-Binance KYC.
Esikrinini sokushintshanisa, chofoza Izilungiselelo kwesibhengezo sobunxele bese ufaka imininingwane eyisisekelo engezansi. Iya kulwazi oluyisisekelo bese uqhafaza inkinobho ethi Qinisekisa endaweni yangakwesobunxele yolwazi lomuntu siqu ukufaka.
Uma ukhetha iKorea njengezwe bese uqhafaza ku-Start, kuvela isikrini sokuqinisekisa ubunikazi. Faka igama lakho lesiNgisi nekheli lesiNgisi kusikrini sokuqinisekisa.
Ungashiya igama eliphakathi kusuka egameni lokuqala bese ufaka igama lokuqala nesibongo kuphela. Kufanele usethe usuku lwakho lokuzalwa bese ufaka ikheli elilandelayo lesiNgisi. Kunzima.
Ikheli lesiNgisi liguqulelwa kukheli lesiNgisi kusetshenziswa isiguquli sekheli le-Naver’s English. Uma uthayipha isiguquli sekheli lesiNgisi ku-Naver, kuzovela. Ngemuva kokufaka yonke imininingwane nokuyithumela, isikrini sokuqinisekisa i-ID siyavela.
Ekuqinisekisweni okuthuthukile, ungakhetha kwiphasiphothi, ilayisense lokushayela, noma ikhadi le-ID (ikhadi lokubhaliswa kwabahlali). Khetha eyodwa evumelana nokulula kwakho bese uqhafaza Qhubeka.
Kumalayisense okushayela nakumakhadi omazisi, ngaphambili nangemuva kumele kuthathwe izithombe futhi kulayishwe. Kufanele uphume ngokusobala ukuze ungashayi. Kuma-passport, kufanele uthathe isithombe sesikrini sephrofayela yakho bese usilayisha.
Chofoza Qhubeka ukuze uqhubeke nokuqinisekisa isithombe sakho.
Isinyathelo esilandelayo ukufaka i-selfie yakho. Kungaba futhi i-ID yesithombe. Sicela ungafaki isigqoko noma izingilazi, ulayishe isithombe sakho esicacile bese ucindezela Qhubeka.
Manje, ubuso obuku-ID yakho noma ipasipoti kufanele buhlolwe ukubona ukuthi ngabe isithombe esithombeni se-selfie noma se-ID osanda kusithumela sifana yini. Uma uqhafaza iSitifiketi sokuQala, ukuqhubeka kokuhlolwa nemiphumela yokuhlolwa yaziswa nge-imeyili.
Ukuqinisekiswa kokusebenzisa umakhalekhukhwini nekhodi ye-QR engezansi kungasetshenziswa lapho kubhaliswa ngohlelo lokusebenza lweselula.
Zonke izinqubo zesitifiketi kumele ziphothulwe kungakapheli imizuzu eyi-15, futhi uma yedlula imizuzu eyi-15, kufanele uqale phansi.
I-akhawunti eyodwa ingaqinisekiswa izikhathi eziyi-10 ngosuku. Uma uhluleka ngaphezu kwezikhathi eziyi-10, ungaphinda uqinisekise ngemuva kwamahora angama-24.
Esigabeni esilandelayo, sizochaza ngokuningiliziwe ukuthi ungabhalisa kanjani usebenzisa uhlelo lokusebenza lweselula lweBinance. Labo abangenakho ukufinyelela kwi-PC bangabhalisa nge-smartphone.
Categories Ungayibhalisela kanjani iBinance Tags Bhalisela i-Binance, i-binance api, IBinance Bitcoin, Idiphozithi ye-Binance, Imajini ye-Binance, Imali ekhokhwayo ye-Binance Futures, Imali yeBinance, Imibuzo ye-Binance Margin, Ishadi leBinance, Izindlela Zokuhweba ze-Binance Margin, Joyina i-Binance, Joyina i-Binance, Ukukhokhwa kwekhadi leBinance, Ungayithengisa Kanjani Ikusasa leBinance Post navigation
Beneficios máximos de la suscripción Bybit
Maximala fördelar vid bybit-prenumeration